The Best Deadman Wonderland Quotes amin'ny fotoana rehetra - Hafa
Ny teny faran'ny Deadman Wonderland tsara indrindra momba ny fanaintainana sy ny famoizam-po
Deadman Wonderland tarehin-tsoratra voalaza ato amin'ity lahatsoratra ity:
Lohahevitra voarakitra amin'ity lahatsoratra ity:
Raha manana sosokevitra ianao deadman Wonderland manonona izany hery tsy hita, zarao amin'ny hevitra.
The Best Deadman Wonderland Quotes:
Kiyomasa Senji Quotes
'Raha malemy ianao, dia aza misaron-tava.' - Kiyomasa Senji
“Mety ho tapaka ny taolako. Saingy tsy izany aho. ' - Kiyomasa Senji
“Ny olon-dehibe sy ny zaza tsy ampy saina ihany no mino fa mampiavaka azy ireo.” - Kiyomasa Senji
'Tsy misy afa-tsy ny tenanao ihany ny hoe mahatalanjona.' - Shiro
“Ilay mpanao volo maditra foana. Androany koa, manokatra lavaka ianao ary manimba ny ala. Ilay andriamanitra hazo tezitra dia nanova ny vavanao ho poizina. Bibikely mahantra, voapoizina ny akaninao. Voapoizina ny sakafonao. Raha mikasika ny namanao ianao dia maty daholo. Ilay valala kely malahelo. Mamiratra be ny ranomasonao misy poizina. ” - Shiro
“Fa fantatrao ve? Misy zavatra iray mahafinaritra an'i Ganta. Nitsangana izy, na manao ahoana na manao ahoana. ” - Shiro
Nagi Kengamine Quotes
“Mafana ny orana. Azoko antoka fa hisy avana tsara tarehy aorian'izay. ' - Nagi Kengamine
'Ny hany olona mampahatsiaro ahy ho manenina dia ireo izay tsy manana hery finiavana.' - Nagi Kengamine
'Miady ho an'ny karazana fahalalahany avy ny tsirairay. Toa kely izany; fa ao am-pon'izy ireo, tsy misy zava-dehibe kokoa. Amin'izany fanantenana izany dia tsy hanana fotoana ampy hamaliana faty na hatahorana aho, sa tsy izany? ' - Nagi Kengamine
'Na dia tsy zanakao aza izy ireo dia tsy azonao jerena, rehefa olon-dehibe, ny ratsy nataony.' - Nagi Kengamine
Toto Sakigami Quotes
“Ny olona malemy dia tsy tompon'andraikitra ary mandehandeha. Aleon'izy ireo mametraka ny tsiny amin'ny hafa ary mamela azy ireo hijaly. ' - Toto Sakigami
I Takami Quotes
silaka tsara tantaram-pitiavana fiainana anime
“Matoky anao aho, Shiro-chan. Adala ianao nanampy ahy. ” - Yo Takami
Teny nalaina Ganta Igarashi
'Maharary ny fiainana, mieritreritra ianao fa tsy fantatray izany? Fa ny sasany amintsika dia misafidy ny hanohy na inona na inona. Ny sasany amintsika tsy manam-potoana hahafatesana ka mahatonga ny olona hitoky fa ho tafavoaka velona isika. ' - Ganta Igarashi
'Rehefa lasa matanjaka kokoa aho dia tsy mila ho fadiranovana toy izao. Te ho matanjaka aho mba hamonoana ilay p pussy ananako izao. ” - Ganta Igarashi
'Tsy hidina aho raha tsy misy ady. Sahala amin'ny helo aho dia hiala! ' - Ganta Igarashi
'Raha tsy hitanao ny zava-dehibe dia satria menatra ianao manokatra ny masonao.' - Ganta Igarashi
seho toy ny malala amin'ny franxx
'Raha hamono ahy ianao, dia vonoy aho. Raha hamono ahy ianao dia aza miandry intsony. Mandra-pahatongan'izany, miaina mifanaraka amin'ny fitsipiko manokana aho! ” - Ganta Igarashi
'Tena tsy te ho faty aho. Te-hanaporofo ny tsy fananako tsiny aho. Ary izy… Hamono ilay lehilahy mena aho! Ary valio ho an'ny rehetra. ” - Ganta Igarashi
'Tsy maninona na adala ity tontolo ity na tsia. Tsy maninona na tena absurdity io. Tsy maninona ny fikorontanan'ity toerana ity… Te-ho velona aho. ' - Ganta Igarashi
'Tsy misy zavatra izay tsy hiova, isan'andro dia hiova kely kokoa ny zavatra.' - Ganta Igarashi
'Ny fiatrehana ny tsy fitoviana dia tsy midika hoe tsy fahatahorana, fa kosa ny fananana maso izay mibanjina tahotra sy mijoro manohitra an'izao tontolo izao.' - Ganta Igarashi
Madoka Shishito Quotes (Manga)
'Ny olombelona tsy mahatsapa fanaintainana amin'ny vatany. Ny ati-doha no mampita ny fanaintainana amin'ny vatana. ' - Madoka Shishito
“Ity no lalàna momba ny fiarovana ny volabe. Ny 'fahasambarana' an'ny olona dia 'tsy fahasambarana' an'ny olon-kafa. Izany no antony nanandramako ho 'dabam-pako' ho an'ireo lehilahy nilalao othello teo an-damosiko tamin'ny fampiasana thumbtacks fotsy sy mainty. Ny fitomaniako sy ny kiakiako dia nisy antony nahatonga azy ireo nihomehy… Saingy diso aho. Tsy misy dikany izany, sa tsy izany? Raha tiako ny tsy faly, io 'fahasambarana' io dia hahatonga ny olona iray hafa 'tsy sambatra.' - Madoka Shishito
Fanononana Tamaki Tsunenaga
'Na dia resy sy maty ianao, dia mbola sarobidy toy ny santionany fanandramana. Tsy havelako handeha very ianao! ' - Tamaki Tsunenaga
“Ny tsara dia miompana amin'ny kolikoly sy ny ratsy.” - Tamaki Tsunenaga
Genkaku Azuma Quotes
“Tsara tarehy be tamin'ny hadalanao ianao. Mahafinaritra amin'ny fahatezeranao mamono olona. Tiako ianao. Fa raha miverina mihemotra amin'ny mpihatsaravelatsihy maimbo tsy mahavonjy olona ianao, dia hovonjeko ianao. ' - Genkaku Azuma
Mitsuzaki Yosuga Quotes (Manga)
'Matahotra ny fahafatesana ny olona satria tsy' azony 'izany, ary matahotra olon-tsy fantatra isika satria tsy' mahalala 'azy ireo. Ny tsy fahafantarana ilay tianao… no tahotra ratsy indrindra ho an'ny rehetra. ” - Mitsuzaki Yosuga
Teny nalaina Ikazuchi Akatsuki
'Ny tontolo dia misy' safidy ', amin'ny teny hafa dia filokana maharitra. Ny bandy hafa tsy mahalala an'io. Nikorontan-tsaina izy ireo tamin'izay. ” - Ikazuchi Akatsuki
Minatsuki Takami Quotes
'Ie, tsy toa ahy io ... Aza mieritreritra izany. Tohizo ny hetsika. Aza variana. Ary rehefa nosokafanao indray ny masonao dia ataovy mihomehy fotsiny izy rehetra! ” - Minatsuki Takami
Loharano misy sary: Deadman Wonderland Wallpaper
Recommended: Teny nalaina avy amin'ny Monster
dubs anime tsara indrindra amin'ny fotoana rehetra
anime toy ny tiako amin'ny franxx
animes mitovy amin'ny darling amin'ny franxx
sary romansa fiainana tsara indrindra